घट्यो पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य, प्रतिलिटर कति ? – ramechhapkhabar.com
घट्यो पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य, प्रतिलिटर कति ?
काठमाडौं – नेपाल आयल निमगले तेलको मूल्य घटाएको छ । इन्धनको मूल्य बढेको विरोधमा आन्दोलनरत विद्यार्थीको माग सम्बोधन गर्दै मूल्य घटाएको हो । निगमले पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य १-१ रूपैयाँले घटाएको छ । नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय २८ रूपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १ सय ११ रूपैयाँ पर्नेछ ।
आज तीन कम्पनीको साधारण सभा हुँदै, के-के छन् एजेण्डा ?
काठमाडौं – आज ३ वटा कम्पनीको साधारण सभा हुँदैछ । नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी, आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था र नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको साधारण सभा हुन लागेको लागेको हो ।